ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု & ထုတ်ကုန်များ - ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှ
ပိုကောင်းတဲ့မော်တော်တရုတ်နိုင်ငံတွင် Professional နဲ့ဦးဆောင် Micro နဲ့မော်တာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်
မှတ်ပုံတင်ပြီးမြို့တော် 26,000,000RMB ဖြစ်ပါတယ်။ AC အစီးရီးမော်တာနဲ့ DC ကညနေမော်တာအတွက်ဗိုလ်မှူး, 20 ပစ္စည်းများ, သတ်မှတ်ချက်တွင်ရာပေါင်းများစွာထက်လုံးဝပိုပြီးရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အပေါ်အမြင့်ဖိအားအဝတ်လျှော်, လက်သမားစက်ယန္တရား, လေ Compressor, ကြမ်းပြင် Processor, သန့်စင်, juicer, ပန်ကာနှင့် eg မော်တော်။ မြင့်မားသောဖိအားအဝတ်လျှော်မော်တာများအတွက်, နည်းပညာ, အရည်အသွေးသို့မဟုတ်စျေးကွက်ဝေစုအတွက်နေပါစေ, သာ. ကောင်း၏မော်တော်လုံးဝတရုတ်နိုင်ငံတွင်နံပါတ် 1 ဖြစ်ပါတယ်။